PON Standards – Oakkar7's Blog
On January 14, 2010 By oakkar7In FTTH (ဖိုင်ဘာ)
FTTH Council Logo
FTTH system တွေကို standard, rule, regulation တွေထိမ်းသိမ်းညှိနှိုင်းတာ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကို စုစည်းတာ တွေကို FTTH Coulcil (http://www.ftthcouncil.org/) ကနေ ဆောင်ရွက်ပါတယ်၊ FTTH Council ဟာ Fiber technology developper, supplier, service provider, manufacturer တွေစုစည်းထားတဲ့ Non-profits Organization တစ်ခုပါပဲ။
TU (International Telecom Union) ဟာ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ standards တွေကို ချမှတ်ရာမှာ အလွန်သြဇာ ကြီးပါတယ်၊ ITU-T Recommendation လို့ခေါ်တဲ့ Standard sets တွေဟာ A ကနေ Z အထိ ရှိပါတယ်၊ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာတွေ ကို သူ့ အုပ်စုနဲ့သူ ခွဲထားတာပါ၊ ဥပမာ Transmission systems and media, digital systems and networks နဲ့ပါတ်သက်တာတွေဟာ G နဲ့ စပါတယ်၊ G.992, G.989 စသည်ဖြင့်ပါ။
“I Tripple E” လို့သိကြတဲ့ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) အဖွဲ့ကြီးရဲ့ အခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association (IEEE-SA) ကလဲ communications, industry, power စတဲ့ နယ်ပယ်တွေမှာ Standard တွေကို ကိုင်တွယ်ကြီးကြပ်ပါတယ်၊ ဒီ Standard တွေကို IEEE Standard လို့ လူသိများပါတယ်၊ ဥပမာ နက်ဝပ်မှာ အလွန်အသုံးများတဲ့ Ethernet ဟာ IEEE 802.3 standard ဖြစ်ပြီး Wireless networking technology တစ်ခုဖြစ်တဲ့ WiFi ကတော့ IEEE 802.11 standard ဖြစ်ပါတယ်။
ပြသာနာက Standardization အဖွဲ့က နှစ်ခု ဖြစ်နေတဲ့အခါ နည်းပညာတစ်ခု ပေါ်လာတိုင်း Standard set တွေဟာ နှစ်ခုစီဖြစ်နေပါတယ်၊ (ITU ဟာ telecommunications နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ standard တွေမှာ သြဇာကြီးပြီး IEEE ကတော့ IT/Networking technology တွေမှာ ပိုပြီး သက်ရောက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်) အခြား သူ့အုပ်စုနဲ့သူ သတ်မှတ်ကြတဲ့ standard တွေဟာလဲ မနဲပါဘူး၊ တချို့ standard တွေက compatible ဖြစ်ပေမယ် တချို့ဟာတွေက မတူပါဘူး၊ တချိုကဟာတွေက လုံးလုံးမှ မတူပါဘူး၊( တချိုကနေရာတွေမှာ သေချာ မတူအောင် လုပ်ထားတယ်လို့တောင် ထင်မိပါတယ်) Service provider, developer, professional တွေအတွက်တောင် တော်တော်ကြီး Confused ဖြစ်ရပါတယ်။
FTTH မှာလဲ စကထဲက Standard နှစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ အဓိကကျတဲ့ PON standard တွေကို ရေးပါမယ်။
1. APON (TDM PON)
အရင်တုံးက telecommunication infrastructure တွေရဲ့ အဓိက Fiber backbones တွေဟာ SONET (Synchronous Optical Network)/SDH (Synchronous Digital Hierarchy), ဒါမှမဟုတ် ATM (Asynchronous Transfer Mode) backbone တွေပဲများပါတယ်၊ SONET/SDH ဟာ TDM (Time Division Multiplexing) ကိုသုံးပါတယ်၊ SDH မှာ အခြေခံအကျဆုံး STM-1 လို့ခေါ်တဲ့ backbone link တစ်ခုဟာ 155Mbps သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး STM-4 link တစ်ခုကတော့ 622Mbps data rate နဲ့ သွားနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်လဲ အစောပိုင်းက FTTH တွေဟာ ဒီTDM link တွေကို အခြေခံပါတယ်၊ ဒီနည်းပညာကို APON(ATM PON), ဒါမှမဟုတ် TDM PON လို့ သိကြပါတယ်၊ SDH/ATM ကို အခြေခံတဲ့ အတွက် ရနိုင်မယ့် speed ဟာလဲ 155/622 Mbps သာရနိုင်ပါတယ်။
2. BPON (Broadband PON)
ITU-T standard, G.983 ဖြစ်တဲ့ ဒီ PON ဟာ အပေါ်က APON ကိုပဲ WDM နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတာပါ၊ ATM/SONET, Ethernet သုံးခုလုံးကို support လုပ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် data rate ကတော့ FTTH ရဲ့ standard rate လို့ပြောကြတဲ့ 1 Gbps speed ကို မရောက်သေးပါဘူး။
3. GEPON (Ethernet PON)
Ethernet PON လို့ခေါ်ကြတဲ့ ဒီနည်းပညာကတော့ ပထမဆုံး Ethernet technology ကို အခြေခံတဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်၊ IEEE ရဲ့ standard ဖြစ်ပြီး 802.3ah ဟာ 1Gbps speed ကို support လုပ်ပြီး 2006 မှာထပ်ပြီး ဖြည့်တဲ့ 802.3av standard ကတော့ 10Gbps speed ကို support ပေးနိုင်ပါတယ်။
4. GPON (Gigabit PON)
IEEE ကနေ 1/10 Gbps speed standard တွေကို လုပ်တဲ့အခါ ITU ကနေ 1/10 Gbps ကို support ပေးမယ့် ITU-T G.984 standard ကို ထပ်ပြီး ထုတ်ပြန်ပါတယ်၊ ထူးခြားတာက Mixed mode protocol, SONET/ATM/Ethernet သုံးခုလုံးကို support ပေးနိုင်တာပါ၊ အရင် ရှိပြီးသား SONET/ATM network တွေကနေ migrate လုပ်ချင်သူတွေအတွက်လဲ မျက်စိကျချင်စရာပါပဲ။
FTTH System Devices and Equipments
Hybrid FTTH Network